130 ciidan oo Mareykan ah oo tagay Ciraq - BBC News Somali
Image caption Xog-hayaha difaaca ee dalka Mareykanka
Xog-hayaha difaaca ee dalka Mareykana Chuck Hagel, ayaa sheegaya in 130 ciidan oo Mareykan ah ay gaareen waqooyiga Ciraaq, si ay gacan uga geystaan xakameynta qatarta ka imaaneysa kooxaha Islaamiga ee mintidiinta ah,
iyo in ay qiimeyn ku sameeyaan xaalada ka taagan gobalkaasi.
Saraakiisha Mareykanka ayaa sheegay in ciidmadaasi ay ka bixin doonaan talooyin sida ugu haboon ee lagu caawin karo dadka lagu qiyaasay soddonka kun ee ku barakacay gobalkaasi kuna xayiran buurta Sinjar oo ay ku hareereysan yihiin kooxda daacish.
Ciidamadani ugu danbeeyey ee la geeyey dalka Ciraaq waxeey isugu jiraan ciidmada badda iyo ciidamo si gaar ah u taba baran, balse saraakiisha Mareykanka ayaa ku adkeysanaya in halkaa ay u tagayaan oo keliya in ay bixiyaan talooyin soona ururiyaan xog gacan ka geysan karta sidii loo fulin lahaa howlaha gargaarka ee ka socda Waqooyiga Ciraaq.
Isbuucii la soo dhaafay maamulka Mareykanka ayaa waxa uu bilaabay howlgalo Milatari oo la doonayey in lagu difaaco ciidmada Mareykanka ah ee jooga Gobalkaasi, iyo in sidoo kale gargaar lagu gaarsiiyo dadka laga tirada badan yahay kuwaasi oo ay qatar ku hayaan kooxaha suniyiinta ah ee Daacish.
Madaxweynaha Mareykanka ee Barak Obama ayaa marar badan ku celceliyey in ciidamada Mareykanka aanay howlgal Milatari ka fulineynin dalka Ciraaq iyo sidoo kale in aanu jirin xal Milatariga Mareykanka uu ku soo afjari karo rabshadaha ka socdo Ciraaq.